“खुसीको खबर ” नेपालमा आज एकैदिन ८८४८ जना को’रोनामुक्त, कति थपिए संक्रमित ? – List Khabar
Home / समाचार / “खुसीको खबर ” नेपालमा आज एकैदिन ८८४८ जना को’रोनामुक्त, कति थपिए संक्रमित ?
“खुसीको खबर ” नेपालमा आज एकैदिन ८८४८ जना को’रोनामुक्त, कति थपिए संक्रमित ?
admin May 22, 2021 समाचार Leaveacomment 97 Views
काठमाडौं ।नेपालमा को’रोना संक्रमित निको हुने क्रम ह्वातै बढेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा ८ हजार ८४८ संक्रमित नि’को भएका छन् । एकैदिन संक्रमणमु’क्त भएका संक्रमितको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो ।
योसँगै सं’क्रमणमुक्त हुनेको संख्या ३ लाख ८३ हजार ६८४ पुगेको छ । अहिलेसम्म नेपालमा ५ लाख १० हजार ८६ जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ भने ६१ सय ५३ जनाको मृ’त्यु भएको छ ।पछिल्लो २४ घण्टामा देशभर ८ हजार ९८० जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ भने १२९ संक्रमितको मृ’त्यु भएको छ ।
अहिले १ लाख १५ हजार ८०६ जना संक्रमित आइसोलेसनमा छन् । त्यस्तै को’रोना संक्रमणबाट राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मन्थली शाखाका प्रबन्धक रविन्द्र मण्डलको शनिबार बिहान ९ः०० बजे नि’धन भएको छ । धनुषा जिल्ला वि’धेह नगरपालिका वडा नं ५ मुडिया घर भएका प्रबन्धक मण्डल बिगत ४ बर्ष देखी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मन्थली शाखामा कार्यरत रहेका थिए ।
Previous नाकको टुप्पोमा हुन्छ यी ५ राशि भएका व्यक्त्तिको रिस